Kubuyela ka-umqhubi ke sephepha-mvume emva deprivation - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Linalo igunya umqhubi ngenkuthalo ithobela imithetho road: ngexesha ukunika indlela, musa emnqamlezweni kabini mhlophe imigca, nika enye indlela abahambi ngeenyawo.
Kodwa nkqu oku akunako isiqinisekiso ukuphepha ezahlukeneyo iintlobo ezininzi ezonakeleyo trouble. Isiphumo ezinjalo iziganeko rhoqo i-ukungazibandakanyi ka-iphepha-mvume lokuqhuba.
Ngoko ke offender kwaye umbuzo phakamani: indlela kubuyela umqhubi ke yephepha-mvume.
Okokuqala, kufuneka sihlale zolile kwaye rationally ukuhlola imeko. Khangela iphepha-mvume lokuqhuba Khangela-umqhubi ishishini esezantsi. Le nkqubo kukuba ngenxa isizathu ka-deprivation WU kwaye ixesha lakhe xesha. Uyakwazi rely kwi kwezabo ukomelela kwaye ulwazi imithetho, kodwa nangona kunjalo elicetyiswayo ukusebenzisa iinkonzo a lawyer abo baya kukunceda ukusombulula lo mba. Eyona nto ayiyo ukwenza impazamo kwi-ngokukhetha u-a, kungenjalo mba uza kuhlala unresolved. Kuyenzeka ukuba abuyele amalungelo? Impendulo enye: Ewe, ngokuqinisekileyo. Amagatya ukunikezela disenfranchisement, kuba ezithile iyasebenza ngeli xesha, ngokulinganayo, phezu indawo ephelela kuyo kweli xesha, amaxwebhu kuza kwakhona kuba legitimate umnini. Urhulumente Duma ye-isirashiya ungeniswa uthotho imithetho ukuba imposiso yorhwebo lwangaphakathi a lifetime disqualification ukusuka unscrupulous abaqhubi umfanekiso. Oku kwenziwa ukuba abantu abathi wanikela offense phantsi kwempembelelo yomoya utywala ukuba ngenxa ekufeni omnye okanye ngaphezulu road traffic neengozi. Ukuba umhla, nangona kunjalo, akukho nanye kwezi imithetho ingaba? ihlala isebenza. Kuba abaqhubi umfanekiso abo musa ufuna linda kude kube sekupheleni ithuba deprivation yamalungelo, kukho inkqubo phambi kwexesha repayment ye-iziqinisekiso. Ividiyo malunga lokuqhuba ban: abaqhubi umfanekiso ibambe ngendlela engalunganga imeko kunye deprivation ka-iphepha-mvume lokuqhuba rhoqo buza umbuzo: kungani ukuba abuyele amalungelo emva entolongweni kwangethuba. Oku kusenokwenzeka ukuba kuthetha ukuba"offender"kokufunyenwe yobomi iziganeko kwaye lowo ufumana ilungele kuvavanya zabo innocence ukuba alleged ukona. Okokuqala, zingaphelanga iintsuku ezilishumi emva verdict, umqhubi kufuneka afake isibheno ukuya kwelona gunya. Ukuba oku deadline iye yadlula, kufuneka ufake isicelo wesithili inkundla. Kwiimeko ezibalaseleyo amatyala, ukuba uncedo kwi-kwangoko kubuyela ka-lakho, amaxwebhu unako European inkundla yamalungelo oluntu. Xa ubhala isicelo, kucetyiswa ukuba uqhagamshelane i-experienced tourist. Oko kuya kusinceda ukuba kakuhle Zichaziwe i-essence le meko ngexesha kwesigqibo kwetyala nge inkundla victory oku umqhubi waba undeniable.
Abanye abaqhubi umfanekiso uya walile ukuba involve ngokwabo kwi-matyala tsala kwaye wenze isigqibo ransom uqwalaselo lwakho.
Esi sigqibo ufumana kunzima ukusebenza ngokupheleleyo ezingachanekanga. Ukuthenga umqhubi ke sephepha-mvume umqhubi kunikela iinkampani ezininzi, kodwa ngabo bonke fraudulent, ngenxa ukunikela enjalo illegally. Isiphumo salo intengiselwano, umqhubi uza noba bahlala ukulahlekiswa, okanye ukufumana iibhonasi i-ID. Kulo naliphi na ityala, lakhe umqhubi ke sephepha-mvume akazange bona. I-uvimba s ka-traffic amapolisa enza Umthetho Kanjalo ukumbule ukuba traffic amapolisa amagosa kuba database kunye uluhlu ye abantu abaseleyo ngaphandle lakho, amaxwebhu. Ukuba enjalo grief-umqhubi uza kuyiphelisa inkqubo uvimba s, kwaye discovers unabo a iibhonasi i-ID, yena ke ujonge kwi-entsha kwenkunkuma, nto leyo iza uninzi kusenokwenzeka ukuba baba, ulwaphulo-mthetho. Yeenkqubo kwi inkundla rhoqo kuyaphela abaxhasayo ka-umtyholwa umqhubi. Kwaye lento ngokukodwa ngenxa procedural violations eziya kuvunyelwe ngumthetho i-traffic amapolisa kwi-ukulungiselelwa Umthetho kwaye abasebenzi ezempilo xa ubhala izenzo i-ukhathalelo njalo. Ukongeza, kukho inani extenuating iimeko ukuba unako ukudlala indima kuba offender.
Ekwenzeni ityala phambi kokuba inkundla kufuneka balandele ezimbalwa ngokufanayo imigaqo: Kukho inani iimeko yenzelwe ukubuyisela amalungelo emva deprivation.
Ngamnye meko kukuba ezahlukeneyo, kwaye ke ngoko ifuna elahlukileyo yobomi iziganeko. Ukususela ngoseptemba, umqhubi abo ufuna ukubuyisa yakhe uchazo emva yovavanyo, kufuneka uthathe i-exam kwi traffic imithetho.
Thorough kwaye kwangoko komhlaba iza kuvumela ukuba babuyele i amaxwebhu ukusuka kuqala, unwanted retake exam nje ahlale a uloyiko lwasebusuku.
Umqhubi kufuneka ube uluhlu lwezinto ezifunekayo nemigaqo-nkqubo kuba abanjalo amaxwebhu.
Abantu deprived zabo uchazo kwi isiseko amanqaku kwi-alcoholic intoxication, necessarily kufanele okokuba zonyango njalo kwi-kubekho contraindications ukuba lakho, motor uthutho kunye traffic amapolisa kuzisa ngendlela efanelekileyo uncedo.
Abanye abaqhubi umfanekiso, deprived zabo amalungelo, le nkqubo akusebenzi. Exam SDA kunokwenzeka ukuba abuyele ilungelo emva yovavanyo ukongeza, kuya kufuneka ngokuchanekileyo bala umhla abuyele lwamaxwebhu. Ukuba umqhubi alifumanisanga contested inkundla ke, isigqibo, kuyenzeka ukuba ukubala umhla abuyele kubaluleke kakhulu kulula: nje ukongeza ukuba umhla emveni kokufumana ikopi isisombululo kwi forfeiture kwishumi kwiintsuku isibheno isigqibo inkundla kwaye ixesha deprivation. Ukuba ubhaliso offense yenzekile kwelinye ukuya offending kummandla, inkqubo ukubuya kwakhe mvume lokuqhuba zibe foliso. I kakhulu uchazo phezu lonke ixesha kwi Isebe i-traffic amapolisa, msebenzi lowo kwaba seized. Ngoko ke, umqhubi ngokwakhe kufuneka utyelele kwesinye isixeko ukukhetha phezulu wam ID ikhadi okanye uqhagamshelane Isebe traffic amapolisa kwi indawo yokuhlala, kodwa kule meko, siya kufuneka ulinde kude kube amaxwebhu safika kulo mmandla nge-imeyili. Yabo amalungelo umqhubi unako ukukhetha phezulu hayi kuphela ngomhla ka-termination of ithuba deprivation.
Amaxwebhu kusibamba kwi-traffic amapolisa iminyaka emithathu, kunye ezongezelelweyo fines kuba elide kwindawo yokugcina ye ngaphandle kwentlawulo.
Ukuba emva kokuba le elithi i-refund ka-iphepha-mvume akazange zenzeke, iza kutshatyalaliswa. Kule meko, umqhubi kuza kufuneka ufumane entsha amaxwebhu Ividiyo malunga fines nokubuyiswa umqhubi ke sephepha-mvume emva deprivation: umqhubi, iyonela kububanzi bephepha ingxaki ka-deprivation lwamaxwebhu, azame kubuya. Oku kunokwenzeka, kwi-ezimbini iimeko: phezu liphele ixesha deprivation ka-umqhubi ke sephepha-mvume okanye xa addressing kwabo phambi kwexesha repayment. Nawuphi na meko violator kuyacetyiswa ukuba bafuna uncedo i experienced lawyer abo baya kwenza wonke umzamo omkhulu ukuze kuphunyezwe babuza ngenxa umqhubi.
ٹیکس قرض مشورہ - ادائیگی کی منصوبہ بندی اور معافی کے اختیارات